အရှေ့တောင်အာရှ၏ အကြီးမားဆုံးသော အွန်လိုင်း အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းစုဖြစ်သည့် PropertyGuru နှင့် iMyanmarHouse.com တို့ လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး - Property News in Myanmar | iMyanmarHouse.com
အရှေ့တောင်အာရှ၏ အကြီးမားဆုံးသော အွန်လိုင်း အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းစုဖြစ်သည့် PropertyGuru နှင့် iMyanmarHouse.com တို့ လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး
24 Sep 2019 3:00 pm တှငျ တငျခဲ့သညျ
5471 ကွိမျ ကွညျ့ရှု့ပွီး
အရှေ့တောင်အာရှ၏ အကြီးမားဆုံးသော အွန်လိုင်း အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းစုဖြစ်သည့် PropertyGuru က တရားဝင် အွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက် မိတ်ဘက်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) အိမ်ခြံမြေဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီးဖြစ်သော iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) နှင့် လုပ်ငန်းများ ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက် PropertyGuru သည် စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်အစရှိသည့် အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွင်း အွန်လိုင်း အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းများနှင့် အိမ်ခြံမြေဆုပေးပွဲများကို ကမကထပြုလုပ်ကျင်းပပေးနေသည့် အာရှထိပ်သီး ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) အိမ်ခြံမြေဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော iMyanmarHouse.com နှင့် မိတ်ဖက်အဖြစ် ပူးပေါင်းလာခြင်းအားဖြင့် အရှေ့တောင်အာရှ၏ အရေးပါအရာရောက်သော ရှေ့တန်းဈေးကွက်များမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခိုင်အမာ နေရာယူရန် ကြိုးပမ်းလာပြီ ဖြစ်သည်။
အာရှတိုက်တွင် အကြီးမားဆုံးနှင့် သြဇာအရှိဆုံး အိမ်ခြံမြေဆုပေးပွဲများ ကျင်းပနေသည့် ကုမ္ပဏီကြီးက အိုင်မြန်မာဟောက်စ် ဒေါ့ကွန်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် မြန်မာ့အိမ်ခြံမြေဆုပေးပွဲကြီးဖြစ်သော 2019 PropertyGuru Myanmar Property Awards အတွက် တရားဝင် ဝက်ဘ်ပေါ်တယ် မိတ်ဖက်အဖြစ် လက်တွဲလိုက်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
PropertyGuru က ကျင်းပမည့် ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် မြန်မာ့အိမ်ခြံမြေဆုပေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆူးလေ ရှန်ဂရီလာဟိုတယ်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်၌ ကျင်းပသွားရန် စီစဉ်ထားသည်။
လစဉ်ဝင်ရောက်အသုံးပြုသူပေါင်း ၃.၈ သန်းကျော်ရှိသည့် iMyanmarHouse.com ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီးသည် မြန်မာ့အိမ်ခြံမြေလောကရှိ စံနမူနာပြု ချီးမွမ်းဖွယ်ရာ အိမ်ခြံမြေ Developer များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများအတွက် ဈေးကွက်ပိုမိုထိုးဖောက်နိုင်စေရန် စွမ်းဆောင်မှုများ ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
“PropertyGuru မြန်မာ့အိမ်ခြံမြေဆု” ရရှိသူများကို iMyanmarHouse.com တွင် အထူးကဏ္ဍတစ်ရပ်အနေဖြင့် ဖော်ပြပေးထားမည်ဖြစ်ရာ အိမ်ခြံမြေရှာဖွေသူများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ကိုးကားစရာတစ်ခု ဖြစ်လာစေမည် ဖြစ်သည်။ PropertyGuru ၏ ဆုရရှိသော ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများကိုလည်း iMyanmarHouse.com ၏ အထူးကြော်ငြာကဏ္ဍများတွင် အခမဲ့ ထည့်သွင်းကြော်ငြာနိုင်ရန် အခွင့်အရေးများ ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
“iMyanmarHouse.com နဲ့ မိတ်ဖက်အဖြစ် ဒီနှစ်မှာ ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ လက်တွဲခွင့်ရတဲ့အပေါ် ကျွန်တော်တို့ များစွာဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တရားဝင် မိတ်ဖက်အဖြစ်နဲ့ iMyanmarHouse.com ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဈေးကွက်ကို ပိုမိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း နားလည်အောင် ကူညီပေးမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက အကောင်းဆုံး စီမံကိန်းတွေနဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို ပြည်တွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာ ပြသခွင့်ရအောင် ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ We are delighted to take our partnership with iMyanmarHouse.com to the next level this year. As our official portal partner, iMyanmarHouse.com gives usadeeper understanding of the local market, allowing us to showcase the country’s most deserving developments and companies in the domestic and international stage” ဟု PropertyGuru ၏ Asia Property Awards ဒါရိုက်တာ မစ္စတာဂျူးစ်ကေ (Mr. Jules Kay) က ပြောကြားသည်။
iMyanmarHouse.com မှ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ကြီးမှူးကျင်းပသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး အိမ်ခြံမြေအရောင်းပြပွဲကြီးများတွင်လည်း PropertyGuru မှ ပါဝင်ကာ ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
အာရှ၏ အယုံကြည်ရဆုံး အွန်လိုင်း အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်ရေး ပလက်ဖောင်း (Asia’s Most Trusted Online Property Platform) ဟူသော ဂုဏ်ကို ထိန်းသိမ်းထားသော PropertyGuru က မိတ်ဖက်အဖြစ် လက်တွဲပါဝင်လာမည့် iMyanmarHouse.com ၏ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် အိမ်ခြံမြေ ပြပွဲကြီးများအတွက် စင်္ကာပူအခြေစိုက် မြန်မာဝယ်လက်များနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံသားများ အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မည်ဖြစ်ရာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေမည် ဖြစ်သည်။
“PropertyGuru နဲ့ အပြန်အလှန် အကျိုးရှိစေမယ့် မိတ်ဖက်အဖြစ် လက်တွဲခွင့်ရတဲ့အပေါ် ကျွန်တော်တို့ များစွာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဈေးကွက်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှ အရည်အသွေး မြင့်မားတဲ့ အိမ်ခြံမြေ စီမံကိန်းတွေလည်း ပိုမိုများပြားလာနေပါတယ်။ အရှေ့ တောင်အာရှရဲ့  သြဇာအရှိဆုံး အိမ်ခြံမြေဆုနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းဟာ ဒီစီမံကိန်းတွေအတွက် ဈေးကွက်ထိုးဖောက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မိတ်ဖက်အဖြစ် လက်တွဲမှုနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Customer တွေဖြစ်တဲ့ အိမ်ခြံမြေနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် များစွာဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ We are excited for this mutually beneficial partnership with PropertyGuru. As the market develops further in Myanmar, there have been more and more quality property development projects. It will beaboost andastrong visibility for them to be recognized by the region’s most prestigious property awards. With this partnership, we are extremely delighted to be adding exceptional value to our customers” ဟု iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) ၏ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးနေမင်းသူက ပြောကြားသည်။
“ဒီလိုအကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ခြံမြေလောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ပြည်ပက ဝင်ရောက်လာမဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မယ်။ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် အဆင့်မြင့်စီမံကိန်းတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အများပြည်သူတွေအတွက် ယူဆောင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးနေမင်းသူက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အရှတေ့ောငျအာရှ၏ အကွီးမားဆုံးသော အှနျလိုငျး အိမျခွံမွလေုပျငနျးစုဖွဈသညျ့ PropertyGuru က တရားဝငျ အှနျလိုငျးဝကျဘျဆိုကျ မိတျဘကျအဖွဈ မွနျမာနိုငျငံ၏ နံပါတျ (၁) အိမျခွံမွဝေကျဘျဆိုကျကွီးဖွဈသော iMyanmarHouse.com (အိုငျမွနျမာဟောကျဈဒေါ့ကှနျး) နှငျ့ လုပျငနျးမြား ပိုမိုပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျရနျအတှကျ သဘောတူ လကျမှတျရေးထိုးလိုကျကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
စငျကာပူနိုငျငံအခွစေိုကျ PropertyGuru သညျ စငျကာပူ၊ မလေးရှား၊ အငျဒိုနီးရှား၊ ထိုငျး၊ ဗီယကျနမျ၊ ဖိလဈပိုငျအစရှိသညျ့ အရှတေ့ောငျအာရှဒသေအတှငျး အှနျလိုငျး အိမျခွံမွလေုပျငနျးမြားနှငျ့ အိမျခွံမွဆေုပေးပှဲမြားကို ကမကထပွုလုပျကငျြးပပေးနသေညျ့ အာရှထိပျသီး ဝကျဘျဆိုကျကွီးတဈခုဖွဈသညျ။ ယခုအခါ မွနျမာနိုငျငံ၏ နံပါတျ (၁) အိမျခွံမွဝေကျဘျဆိုကျဖွဈသော iMyanmarHouse.com နှငျ့ မိတျဖကျအဖွဈ ပူးပေါငျးလာခွငျးအားဖွငျ့ အရှတေ့ောငျအာရှ၏ အရေးပါအရာရောကျသော ရှတေ့နျးဈေးကှကျမြားမှ တဈခုဖွဈသညျ့ မွနျမာနိုငျငံတှငျ အခိုငျအမာ နရောယူရနျ ကွိုးပမျးလာပွီ ဖွဈသညျ။
အာရှတိုကျတှငျ အကွီးမားဆုံးနှငျ့ သွဇာအရှိဆုံး အိမျခွံမွဆေုပေးပှဲမြား ကငျြးပနသေညျ့ ကုမ်ပဏီကွီးက အိုငျမွနျမာဟောကျဈ ဒေါ့ကှနျးကို ၂၀၁၉ ခုနှဈ မွနျမာ့အိမျခွံမွဆေုပေးပှဲကွီးဖွဈသော 2019 PropertyGuru Myanmar Property Awards အတှကျ တရားဝငျ ဝကျဘျပျေါတယျ မိတျဖကျအဖွဈ လကျတှဲလိုကျကွောငျးလညျး သိရသညျ။
PropertyGuru က ကငျြးပမညျ့ ပဉ်စမအကွိမျမွောကျ မွနျမာ့အိမျခွံမွဆေုပေးပှဲကို ရနျကုနျမွို့ရှိ ဆူးလေ ရှနျဂရီလာဟိုတယျတှငျ ၂၀၁၉ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ ၁၈ ရကျ၌ ကငျြးပသှားရနျ စီစဉျထားသညျ။
လစဉျဝငျရောကျအသုံးပွုသူပေါငျး ၃.၈ သနျးကြျောရှိသညျ့ iMyanmarHouse.com ဝကျဘျဆိုကျကွီးသညျ မွနျမာ့အိမျခွံမွလေောကရှိ စံနမူနာပွု ခြီးမှမျးဖှယျရာ အိမျခွံမွေ Developer မြားနှငျ့ ဆောကျလုပျရေးစီမံကိနျးမြားအတှကျ ဈေးကှကျပိုမိုထိုးဖောကျနိုငျစရေနျ စှမျးဆောငျမှုမြား ပေးနိုငျမညျ ဖွဈသညျ။
“PropertyGuru မွနျမာ့အိမျခွံမွဆေု” ရရှိသူမြားကို iMyanmarHouse.com တှငျ အထူးကဏ်ဍတဈရပျအနဖွေငျ့ ဖျောပွပေးထားမညျဖွဈရာ အိမျခွံမွရှောဖှသေူမြားနှငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူမြားအတှကျ တနျဖိုးမဖွတျနိုငျသော ကိုးကားစရာတဈခု ဖွဈလာစမေညျ ဖွဈသညျ။ PropertyGuru ၏ ဆုရရှိသော ဆောကျလုပျရေးစီမံကိနျးမြားကိုလညျး iMyanmarHouse.com ၏ အထူးကွျောငွာကဏ်ဍမြားတှငျ အခမဲ့ ထညျ့သှငျးကွျောငွာနိုငျရနျ အခှငျ့အရေးမြား ပေးအပျသှားမညျ ဖွဈကွောငျးလညျး သိရသညျ။
“iMyanmarHouse.com နဲ့ မိတျဖကျအဖွဈ ဒီနှဈမှာ ပိုမိုနကျရှိုငျးစှာ လကျတှဲခှငျ့ရတဲ့အပျေါ ကြှနျတျောတို့ မြားစှာဝမျးမွောကျမိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ တရားဝငျ မိတျဖကျအဖွဈနဲ့ iMyanmarHouse.com ဟာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ဈေးကှကျကို ပိုမိုနကျနကျရှိုငျးရှိုငျး နားလညျအောငျ ကူညီပေးမှာဖွဈပွီး မွနျမာနိုငျငံအတှငျးက အကောငျးဆုံး စီမံကိနျးတှနေဲ့ ကုမ်ပဏီတှကေို ပွညျတှငျးနဲ့ နိုငျငံတကာမကျြနှာစာမှာ ပွသခှငျ့ရအောငျ ကြှနျတျောတို့ကို ကူညီသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ We are delighted to take our partnership with iMyanmarHouse.com to the next level this year. As our official portal partner, iMyanmarHouse.com gives usadeeper understanding of the local market, allowing us to showcase the country’s most deserving developments and companies in the domestic and international stage” ဟု PropertyGuru ၏ Asia Property Awards ဒါရိုကျတာ မစ်စတာဂြူးဈကေ (Mr. Jules Kay) က ပွောကွားသညျ။
iMyanmarHouse.com မှ စင်ျကာပူနိုငျငံတှငျ ကွီးမှူးကငျြးပသော မွနျမာနိုငျငံ၏ အကွီးဆုံး အိမျခွံမွအေရောငျးပွပှဲကွီးမြားတှငျလညျး PropertyGuru မှ ပါဝငျကာ ပံ့ပိုးပေးမညျဖွဈကွောငျးလညျး သိရသညျ။
အာရှ၏ အယုံကွညျရဆုံး အှနျလိုငျး အိမျခွံမွေ ရောငျးဝယျရေး ပလကျဖောငျး (Asia’s Most Trusted Online Property Platform) ဟူသော ဂုဏျကို ထိနျးသိမျးထားသော PropertyGuru က မိတျဖကျအဖွဈ လကျတှဲပါဝငျလာမညျ့ iMyanmarHouse.com ၏ စင်ျကာပူနိုငျငံတှငျ ကငျြးပမညျ့ အိမျခွံမွေ ပွပှဲကွီးမြားအတှကျ စင်ျကာပူအခွစေိုကျ မွနျမာဝယျလကျမြားနှငျ့ စင်ျကာပူနိုငျငံသားမြား အတှကျ ယုံကွညျစိတျခစြှာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံနိုငျမညျဖွဈရာ တနျဖိုးမဖွတျနိုငျသော အခှငျ့အလမျးမြား ရရှိစမေညျ ဖွဈသညျ။
“PropertyGuru နဲ့ အပွနျအလှနျ အကြိုးရှိစမေယျ့ မိတျဖကျအဖွဈ လကျတှဲခှငျ့ရတဲ့အပျေါ ကြှနျတျောတို့ မြားစှာ ဂုဏျယူမိပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဈေးကှကျစီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးလာတာနဲ့အမြှ အရညျအသှေး မွငျ့မားတဲ့ အိမျခွံမွေ စီမံကိနျးတှလေညျး ပိုမိုမြားပွားလာနပေါတယျ။ အရှတေ့ောငျအာရှရဲ့ သွဇာအရှိဆုံး အိမျခွံမွဆေုနဲ့ အသိအမှတျပွုခံရခွငျးဟာ ဒီစီမံကိနျးတှအေတှကျ ဈေးကှကျထိုးဖောကျမှု ပိုမိုကောငျးမှနျလာစမှော ဖွဈပါတယျ။ ဒီလို မိတျဖကျအဖွဈ လကျတှဲမှုနဲ့အတူ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ Customer တှဖွေဈတဲ့ အိမျခွံမွနေဲ့ ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးတှအေတှကျ ထူးခွားကောငျးမှနျတဲ့ ဝနျဆောငျမှုတှပေေးနိုငျမှာဖွဈတဲ့အတှကျ မြားစှာဝမျးမွောကျမိပါတယျ။ We are excited for this mutually beneficial partnership with PropertyGuru. As the market develops further in Myanmar, there have been more and more quality property development projects. It will beaboost andastrong visibility for them to be recognized by the region’s most prestigious property awards. With this partnership, we are extremely delighted to be adding exceptional value to our customers” ဟု iMyanmarHouse.com (အိုငျမွနျမာဟောကျဈဒေါ့ကှနျး) ၏ မနျနေးဂငျြးဒါရိုကျတာ ဦးနမေငျးသူက ပွောကွားသညျ။
“ဒီလိုအကြိုးတူ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျမှုဟာ မွနျမာနိုငျငံအိမျခွံမွလေောက ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျဖို့တှကျ တဈထောငျ့တဈနရောကနေ ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ပွညျတှငျးလုပျငနျးရှငျတှနေဲ့ ပွညျပက ဝငျရောကျလာမဲ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှကေို ထိထိရောကျရောကျ ခြိတျဆကျပေးနိုငျမယျ။ အိမျခွံမွလေုပျငနျးတှနေဲ့ ပတျသတျလာရငျ အဆငျ့မွငျ့စီမံကိနျးတှနေဲ့ နိုငျငံတကာအဆငျ့မှီ ဝနျဆောငျမှုတှကေို အမြားပွညျသူတှအေတှကျ ယူဆောငျလာနိုငျမှာဖွဈပါတယျ” ဟု ဦးနမေငျးသူက ဖွညျ့စှကျပွောကွားခဲ့သညျ။
ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်း အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် လက်မှတ်ရေးထိုး